Xiddigaha Bollywood ee quraafaadka aaminsan, Hrithik dadka ayuu wax dheer yahay illaa Ranbir oo hooyadiis ku saacsada (Qeybta 2aad) | Filimside.net
Home » Bollywood News » Xiddigaha Bollywood ee quraafaadka aaminsan, Hrithik dadka ayuu wax dheer yahay illaa Ranbir oo hooyadiis ku saacsada (Qeybta 2aad)
Waa qeybtii labaad ee warbixintii aan kaga hadleynay xiddigaha caanka ah ee Bollywood kuwaasoo quraafaadka aaminsan.
Waxaana xusid mudan inay liiskaan kasoo muuqan doonaan qaar ka mid ah jillaayaasha ugu magaca dheer Bollywood Film Industry kuwaasoo waxyaabo yaab leh ku saacsada.
HR waa mid ka mid ah xiddigaha ugu muuqaalka qurxoon Bollywood, wuxuuna leeyahay suur dheeri ah, kaasoo uu aaminsan yahay inuu nasiib dheeri ah u yeelo, wuxuuna ku kaftamay inuu ka nasiib badan yahay dadka aan seddaxda suul gacmaha ku laheyn.
Mr Perfectionist of Bollywood ayaa isna ka mid ah jillaayaasha Bollywood ee aaminsan quraafaadka maxaa yeelay aflaantiisa ayaa marwalba soo baxa bisha December ee sannadka ugu dambeysa, wuxuuna aaminsan yahay inuu filimkiisu guuldarreysano haddii uusan soo bixin bisha December.
Khiladi Kumar ayaa marwalba u duula debebadda marka aflaantiisa la daawanayo, wuxuuna aaminsan yahay in uusan filimkiisu guul gaareyn haddii uusan India ka bixin. Akki ayaa aaminsan quraafaad ahaan in haddii uu joogo India uusan filimkiisu guul ka gaareyn Box Office-ka.
#10 KATRINA KAIF
Mid ka mid ah atariishooyinka ugu shidan Bollywood waqtigaan, Katrina ayaa marwalba booqata masaajidka Khwaja Moinuddin Chisti ee ku yaalla Ajmer ka hor inta aysan aflaanteedu soo bixin.
#11 RANBIR KAPOOR
Ranbir Kapoor ayaa quraafaad ahaan ka dambeeya lambarka 8aad, waana sababta uu uga muuqdo taargada gawaaridiisa. Ranbir wuxuu aaminsan yahay inuu nasiibkiisu ku xiran yahay hooyadiis Neetu oo dhalatay maalin ay bishu tahay 8.
Dhammaad – Waad ku mahadsan tahay akhriskaaga.
FILIMSIDE – Hoyga Wararka Aflaanta.
Waxaa Aqrisay 1,145